skpari: दूध र कपबाट मोनालिसाको फोटो चित्र
दूध र कपबाट मोनालिसाको फोटो चित्र
मानिसहरुमा ईच्छा र जांगर भयो भने गर्न नस्कने केही हुन्दैन् भने भनाई, हालै अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको the rocks Aroma Festival Sydney मा मोनालिसाको २० फीट लम्बाई र १३ फिट चौडाई क्षेत्रफलको दूध र कपको मिश्रणबाट तिन हजार छ सय चार वटा कप र कफी तथा पाँच सय ६४ पिन्ट दूध प्रयोग गरी त्यसैको मिश्रणबाट लियोनार्दो दा भिन्सीकी प्रिय पात्र मोनालिसाको नयाँ स्वरुपको चित्र बनाईएको डेली मेलले जनाएको छ।
चित्र बनाउन दूध, कालो कफी र ती दुबैमा पानीको उपयोग गरी त्यस चित्रलाई मूर्त रुप दिनका लागि ८ जनाको एउटा समूहलाई तीन घण्टाभन्दा बदी समय लगाएको थियो।
कफीको लोकप्रियतालाई बढाउने उदेश्यले आयोजना गरिएको यो महोत्सवकी संयोजक एलिन केली यो परिणामबाट निकै खुशी भएकी छिन्। सिड्नी हार्बर फोरशोर अथोरटीले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो र त्यस मोनालिसाको चित्र प्रमुख आकर्षणमध्ये एक थियो।
३,४०६ कप कफी अनी ५६४ पिन्टस् दूधबाट बनाएको मोनालिसाको चित्र।
झिलिमिली बतीको प्रकाश मा गगन चुमी सिड्नीको महलहरु
हेरनुस त झत हेर्दा पेपर मै बनाए जस्तो लाग्दै र.....?
कन्सर्टमा रमाई रहेका दर्शकहरु
मोनालिसाको ओर्जिनल चित्र
आउनुस् भिडियो हेरौं कसरी बनाएको रहेछ मोनालिसाको चित्र….
at Wednesday, August 19, 2009 Labels: बिचित्रको संसार
खै परि जी , आवश्यकता मात्रले घेरिरहेको हामि नेपालीलाई यो आकर्षण हो कि हैन होला म त ठम्याउन सकिरहेको छैन । तर जसले जे का लागि मेहेनत गरे त्यो तारिफ योग्य भने अवश्य छ ।